Mazino Asipo | Optismile Yepamberi Dentistry muCape Town
Rimwe kana mamwe mazino akashaika anogona kuve nesimba rakakura pamabatiro atinoita nezvechitarisiko chedu, kunyanya kana chichionekwa patinonyemwerera kana kutaura. Haisi nguva dzose chimwe chinhu chinogona kubatsirwa. Dzimwe nguva tinorasikirwa nemeno nekuda kwetsaona, chirwere kana kuora kwakanyanya kwemazino uye hazvisi nyore kuti zvigadziriswe ipapo ipapo. Ngatizvitarisei izvi, kutsiva rimwe kana anopfuura mazino kunogona kunge kuchidhura. Kunze kwezviri pachena zvekushongedzerwa nemazino akashaikwa, kune zvekare maficha epanyama ekuve nemazino akashaikwa ayo anogona kuwedzera mukusagadzikana.
Zino rega rinoverengerwa sezvo richive nechokwadi chehutano shaya pfupa uye matadza uye zvinodzivirira iwe kutaridzika kunge wakura kupfuura zvauri chaizvo. KuOptiSmile takabata nezviitiko zvakawanda zvemeno asipo, uye zvinogara zvichishamisa kuona mutsauko kunyemwerera kungadzoreredzwa kunogona kuita pakuonekwa kwemunhu uye nekudaro kuvimba kwavo. Iwo matekinoroji emazino atinoshandisa mukuita kwedu anosarudzwa uye anoshandiswa nechinangwa chaicho chekupa varwere mhinduro dzakanakisa dziripo. Saka kana iwe ukauya kuOptiSmile kune implant, mabhiriji kana veneers, iwe unogona kuve nechokwadi chekuti isu tichashanda newe kukugadzirira yakanakisa kunyemwerera iwe.
Nei Kushaikwa Mazino Iri Dambudziko?
Chinhu chekutanga vanhu vanofunga nezvacho kunaka kwemaitiro ekushaya mazino. Kunyemwerera kune hutano kunogona kuenda nenzira yakareba uye kuva nemipengo mumuromo mako kunogona kukanganisa manzwiro atinoita munharaunda dzemagariro. Iwo ekutanga ekutanga mhedzisiro yemazino akashaika anogona kuve akadzama epfungwa, asi izvo zviri pachena, zvinoramba zvichiitika zvekurasikirwa kwezino zvinogona kuenderera, kunyangwe mushure mekutanga kurasikirwa kwezino kana mazino.
Kurasikirwa kwemeno kunoenderera kuve dambudziko kune shaya, nekuda kwekukanganisa kwekurasikirwa kwemeno pamapfupa. Mazino anosimudzira shaya pfupa. Iyo jaya bone inovimba neiyi kusangana pakati pemazino, matadza uye pfupa kuti irambe iri chimiro uye kuwanda. Zvakafanana nekuti kusaita basa kunogona sei kukonzera kurasikirwa kwemapfupa uye matambudziko ekupedzisira kana isu tachembera, zvakafanana neshaya.
Mazino anoita kusangana kunoramba kuripo kune mumwe neumwe kuburikidza nekufamba kwezuva, izvi zvishoma zvibatano zvinomutsiridza iyo periodontal ligament, umo zino rimwe nerimwe rakamiswa, uye izvi zvakare zvinotaurira pfupa rakakomberedza kuti riwedzere uye pakupedzisira kuzvisimbisa pachezvayo.
Mugore rekutanga chete mushure mekurasikirwa kwezino panogona kuve nekukwira kwakadzika se25% muhupamhi hwepfupa munzvimbo iri padyo nezino risipo. Izvi zvinogona kutungamira kusvika pamamirimita mana ekukosha kwepfupa mumakore anotevera. Kurasikirwa muhupamhi hwepfupa kunotungamira mukurasikirwa mukukwirira kwemapfupa kunogona kutanga kukonzera matambudziko nekutsenga nekutaura. Kuenderera mberi kurasikirwa kwemeno kunogona zvakare kuve mhedzisiro nekuda kwenzvimbo dzegum dzakatenderedza dzichiita shoma. Kuenderera mberi kurasikirwa kwemeno kunowanzo kutungamira kune mamwe matambudziko anoshanda anongopfuudzira dambudziko.
Nekufamba kwenguva shaya chaiyo inogona kusungunuka, izvo zvinogona kukonzeresa kumeso kudonha, zvichikonzera kumonyoroka kumeso, zvichikonzeresa dzimwe nyaya dzekunaka.
Ndeapi Mhinduro Dziripo?
Solutions Advantages payakaipira
Zino-rinotsigirwa rakagadziriswa mabhiriji
Mazino anodyara akavhiyiwa akaiswa simbi mbiru. Dzinoiswa mushaya iri pasi pematadza. Mazino ekutsiva anozoiswa pamatanda.
Zvirimwa zvinopa rutsigiro kumeno akakomberedza
Yakadzika mumutsetse chaiwo wegum, ichipa kukurudzira kunokurudzira kuchengetedza kwemapfupa
Yenguva refu sarudzo
Kupfeka kushoma pamazino akapoterera
Hazvidi kugara uchiongororwa mushure mekuita
Hazvigone kukanganisa mabasa emuromo sekutaura kana kudya
Chekutanga kudyara maitiro kunogona kukanganisa
Inogona kuve nzira inodhura
Dzino-rinotsigirwa rakagadziriswa mabhiriji (echinyakare mabhiriji)
Izvi zvinosanganisira kuiswa korona kune rimwe divi rezino risipo uye nekuisa porcelain pontic pakati kuti ishande sezino nyowani yekugadzira.
Yakakurumbira sarudzo yezino rimwe chete risipo
Inogona kuisa dambudziko pameno akakomberedza
Kukuvadza kwemazino akakomberedza nekuda kwekuiswa kwekorona
Kuora kwepfupa kunogona kuramba kuchingoitika sezvo zino risina kuiswa mumutsetse wegamu
Hazvigone kugara kwenguva yakareba sekuisirwa uye zvingangoda kutarisirwa nekuenderera mberi nekuchengetedza
Inobviswa chikamu chemazino
Chimiro chinobviswa chakabata rimwe kana anopfuura mazino ekugadzira.
Yakakurumbira sarudzo yemazino mazhinji asipo
Kwete kugadzikana semazino anodyara
Inogona kukurudzira kutaura
Haitaridzike seyakasikwa sekuisirwa
Resin bonded zambuko (Maryland bonded zambuko)
Chakagadzirwa (porcelain) meno akatsigirwa nesimbi kana furemu furemu. Simbi kana porcelain mapapiro kune rimwe kana rimwe divi rezino rakasungirirwa kune ako aripo mazino.
Inonamira kumazino ari padyo kuti ipe support
Zvishoma kudhura pane kudyara
Kukuvara kudiki kumazino akakomberedza
Kureba kwenguva refu
Haitsigire yakakomberedza chingamu nzvimbo uye pfupa, saka kuora kunogona kuitika
Inobvisika mazino ekupedzisira
Chimiro chinobviswa chakabata seti rese remeno ekugadzira.
Yakaderera mutengo imwe nzira yekuisa
Inokurumidza kuita pane kudyara
Inogona kutsamwisa matadza
Hazvidziviriri kuora kwepfupa
Inogona kuchinja kana mumwe achitaura, achitaura, yawn kana kukosora
OptiSmile Inogona Sei Kukubatsira Iwe
KuOptiSmile isu tinotenda mukungopa mhinduro dzakanakisa kuvarwere vedu, ndosaka isu tichinyanya kuita implant. Ndiyo mhinduro yakanakisa yenguva refu maererano nekusimba uye hunyanzvi maxillofacial hutano. Isu tinotenda kuti ichokwadi kwazvo kuvarwere vedu uye tichiramba tichiona mibairo yakanaka yerudzi rwekuvhiya iyi pahutano hwepfungwa uye hwepanyama.
Isu tinowanzo kuve neyekutanga kubvunza newe kuti tiongorore mamiriro emazino ako uye kubva pane izvo isu tichaita kurudziro. Kana ukasarudza kuenda kumberi nehurongwa hwekudyara mazino maitiro acho anotevera, zvisinei iwe unogona zvakare kudzidza zvakawanda nezvema meno ekuisira pane edu akazara mazino anodyara peji.
1. Tinotora a 3D scan yemuromo wako
2. Dhirivhari inofungidzirwa inotorwa nenzvimbo yakakanganiswa
3. Makomputa dhizaini neCEREC inoveza zino idzva
4. Nhungamiro inogadzirirwa kuiswa kwakakodzera kweako titanium kudyara
5. Kuiswa kunoiswa panzvimbo chaipo uye zino idzva rakabatanidzwa
Kazhinji mhando iyi yemafambisirwo ingangoda kushanya kaviri kuti upedze. Tinoziva nguva yako yakakosha, saka tinoshandisa zvinoshamisa CEREC mudziyo kupedzisa kudzoreredzwa kamwechete.
Unogamuchirwa kuti utaure nesu kuti utore bhuku rekutanga kubvunza kana kutaura nechikwata chedu kuburikidza neWhatsApp kana iwe uine chero mibvunzo yakanangana nezve nzira yekudzoreredza zino risipo. Isu tinofara kupindura chero yemibvunzo yako uye tichagara tichishanda nevarwere vedu kuti tiwane mhinduro.
Iko kunogara kune mhinduro, usarega meno akashayikwa achikutadzisa kutungamira hupenyu hunofadza hune hutano.